होशियार नभए आंशिक निषेधाज्ञा तथा लकडाउनले झनै जोखिम, डेरी बन्द तर होटल खुला ! | Prabhavkari News
होशियार नभए आंशिक निषेधाज्ञा तथा लकडाउनले झनै जोखिम, डेरी बन्द तर होटल खुला !
मैले जे देखे त्यहि लेँखे
दमक/ सोमबार देखि झापामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले निषेधाज्ञा जारी गर्दै यसको पालना गर्न सबैसंग आग्रह गरेकाछन् । जिल्लामा कोरोना संक्रमण उच्च भएसंगै निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको हो । आदेशमा उल्लेख भए अनुसार नागरिकले पुर्ण निषेधाज्ञा पालना गर्न मुश्किल छ । तर यो गर्न जरुरी छ र गर्नु पर्छ । बिगतका लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा आदेश खासै पालना भएको देखिएको थिएन ।
आंशिक निषेधाज्ञा अर्थात विहानको समयमा बजार खोल्न दिईने उल्लेख छ । यसो गर्दा दिनभर आउने ग्राहक तथा उपभोक्ता पसलमा त्यो समयमा अवधिमा आउनु पर्ने अवस्था रहन्छ र आउछन् । यसले गर्दा झन् भिड बढ्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ ब्यवसायीलाई र उपभोक्तालाई पनि छिटोछिटो आफ्नो काम सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यसले आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गौण रहन्छ । यसबाट झन् जोखिम बढ्ने देखिन्छ । अझ डेरी तथा अत्यआवश्यकीय खाद्यन्न पसलहरु बन्द रहने तर होटल/रेष्टुरेन्ट बन्द नहुने किसिमको निषेधाज्ञा छ । करिब १२ घण्टा खुल्ने पसल तथा ब्यवसाय ५ घण्टा खुल्दा चाप बढ्ने भएकाले संक्रमणको भय बढ्ने त होइन ? यसले झन् खतरा निम्त्याउने त होइन ? सोच्न आवश्यक छ ।
यसको अर्थ यो होइनकी निषेधाज्ञाको औचित्य छैन । पक्कै पनि सर्वसाधरण र ब्यवसायीको हितमा नै यो आंशिक निषेधाज्ञाको परिकल्पना गरिएको हो । उपभोक्ताले पनि यो समयमा आफुलाई चाहिने सामान किन्न सकुन र ब्यापारीले पनि बेच्न सकुन । तर आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड न ब्यापारीले पालना गरेको देखिन्छ न त उपभोक्ताले । यसले गर्दा यस बिषयमा गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ । अत्यआवश्यक भएमात्र पसल खोल्ने र उपभोक्ता पनि पसलमा जाने हो भने यसको औचित्य सावित हुन्छ ।
यस्तो आंशिक निषेधाज्ञा भन्दा पुर्ण लकडाउन वा निषेधाज्ञा नै उपयुक्त हुने अधिकाँशको राय पनि देखिन्छ । बजारमा गएर र बुद्धिजीवि तथा सरोकारवालाहरुसंग कुरा गर्दा केहि समय पुर्ण लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्दा कोरोना संक्रमणलाई केहि कम गर्न सकिने धारणा भएको पाईन्छ । यसले अति निम्न बर्गिय जनमानसलाई गम्भिर असर गर्ने र ब्यवसायी पनि मारमा पर्ने बिषय पनि आउछ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र आवश्यकता अनुसारमात्र वाहिर निस्कने हो भने आंशिक निषेधाज्ञा सार्थक पनि बन्न सक्छ । तर यो परिपाटी देखिदैन र देखिएको छैन ।
माक्सको अनिवार्य प्रयोग, सेनिटाइजर तथा साबुनपानीले हात धुने ब्यवस्था अनिवार्य पसलहरुमा गर्न भनिएको छ । तर अधिकाँश पसलहरुमा यो देख्न पाइन्न। पछिल्लो समयमा माक्सको प्रयोग गर्ने क्रम भने बढेको छ । यो एक किसिमले सकारत्मक हो । किनभने यसभन्दा अघि माक्स लगाउनेको संख्या निक्कै न्यून थियो । अहिले माक्स नलगाउनको संख्या न्यून छ । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन र यसबाट सुरक्षित हुन माक्सको प्रयोगमा विज्ञहरुले जोड दिदै आएकाछन् ।
मानव स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो बिषय भएकाले कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि प्रशासनको आदेशलाई पालना गर्न आवश्यक छ । लुकिलुकि पसल खोल्ने, प्रशासनको आदेशको अवज्ञा गर्ने, तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड एवं प्रोटोकल ख्याल नगर्ने हो भने संक्रमण दर उच्च भएर ठुलो बिपती आउन सक्छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सामुहिक पहल आवश्यक छ । यसका लागि हरेकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने र अहिलेको गम्भिरतालाई बुझेर निषेधाज्ञा पालना गर्ने हो भने हामी अहिलेको महामारीबाट बच्न सक्छौ । अन्यथा हामी आफै पनि संक्रमित बन्न सक्छौ र जोखिममा वहन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
डा. भगवान कोइरालाले समस्यालाई ब्याक्तिगत रुपमा नलिन दिएको सुझाव निक्कै सान्दर्भिक लागेको छ । उनले आफ्नो एक अन्तरवार्तामा भनेकाछन्-